[Sawir ka qaadid shaashadda]
Waa qaab kuu sahlaya in aad sawirtid dhammaan shaashadda Kambuyuutar ama bog Internet ah. Waxaan casharkaan ku barandoonaa qaabka iyo habka lamaro marka shaashada (srceen) larabo in lasawiro.
Maxaad u baahantahay si aad u samaysid Sawirka Shashadda (screen capture)?
Ugu horrayn waa in kambuyuutarka uu kujiraa barnaamij (program) xamilikara ama awood u leh sawirada (images).
Waxaan qiyaasayaa in badanaa kambuyuutarada uu kujiro barnaamijka lagu magcaabo "PAINT", kaas ayaana adeegsan doonaa.
Xagee barnaamijkani kagajiraa Kambuyuutarkaaga?
Start > Progarms > Accessories >
Mar haddii aad ogaatey halka "PAINT" kagajiro Kambuyuutarkaaga waxaan bilaabeynaa qaabkii samynta "Sawirka Shaashadda", waana kan hoos kuqoran:
Waa in aad ogtahay bogga ama shabakada aad rabtid in aad sawir kasamaysid. Tusaale ahaan waxaan soodiyaarsaday bogga Somalitalk.com,
Shaashada waa in uu kamuuqdaa bogga ama qaybta aad rabtid in aad sawirtid,
Shaashada oo weli uu kamuuqdo qaybtii aad rabtey in aad sawirtid, waxaad riixdaa [GUJI] halka ay kuqorantay "PRINT SCREEN" ee KeyBoard-ka. Eeg halka calaamada Cad ay kutaal ee KeyBoard-ka kamuuqda sawirka dhanka midig (Xusuusnow in sawirka KeyBoard-ka uusan ahayn isagoodhammaystiran ee uuyahay qaybta midig ee Keyboard-ka). Halkaas waa meesha ay Kambuyuutarada badanaa kagaqorantahay "Print Screen" waana meesha aad rabtid in aad Gujisid ama riixdid.
Kaddib waxa aad lasoobaxdaa barnaamijkii "Paint" adiga oo raacaya xeerka korkusharaxan ee [Start > Progarms > Accessories > Paint]. Waxaa kuusoobaxaya barnaamijkii oo aanwaxba kuqorayn sida kamuuqata sawirka dhanka midig kamuuqda oo ah qaabka uu u egyahay "Paint Program"
Waxaa lagayaabaa in aad isweydiisid, maxaa kudhacay ama maxaa boggii aan rabey in uu sawirmo uu uga soobixiwaayey "Paint"?. Jawaabtu waxay noqonkartaa, weli ma aadan samayn ficilkii sababilahaa in arintaasi dhacdo, ee hadaba akhri qodobka hoos kuqoran. Waxaakale oo lagayaabaa in aad isweydiisey xagee kuxafidan yahay sawirkii illeyn waa anigii riixay "Print Screen"?, Jawaabtu waxay noqonkartaa weli waxa uu kujiraa maskaxda kambuyuutarkaaga oo hadii aadan kambuyuutarka damin weli wuukuu xusuusanayaa sawirkaas.
Tallaabada xigta waa in aad raacdid sida kamuuqata sawirka midigta ah, taas oo ah in aad barnaamijka "paint" halka ay kuqorantahat EDIT aad riixdid [Guji}, kaddibna aad riixdid halka ay kuqorantahay PASTE sida kamuuqata sawirka midigta [Edit > Paste]. Taasi waa qaabka kuu sahlaya in sawirkii uu kasoobaxo "Paint" dhexdiisa, waxaadna arkidoontaa sawirkii aad rabtey oo kadhexmuuqda "Paint". Hadii waxwalba ay udheceen sidii kuhaboonayd waxaad markaas arkidoontaa arintan oo xaqiiq ah.
Marka sawirkii kasoobaxo shaashada "Paint" waxaad markaas kuxafidikartaa meelkamida kambuyuutarkaaga adiga oo adeegsanaya "SAVE AS". [Had iyo jeer xusuusnow halka aad sawirka kuxafideysid si aad hadhow si sahala ugu heshid]
Waxaad gaartey guulweyn marka aad sawirkii kuxafiday meeshii aad rabtey, tallabada kuxigtaa waa in aad sawirkii ama (image) aad u adeegsatid sidii aan kusoo aragnay qaybtii sawirada.
Cillada lagayaabo in aad ku aragtid adeegsiga "Paint" waa iyada oo sawirkii uu noqonayo nooca looyaqaan Bitmap taas oo uu raacayo lifaaqa .bmp , Taas macneheedu waxaaweey haddii aad adeegsanlahayd tusaale ahaan "Microsoft Image Composer" waxaad markaas kuusuuta gelilahaa in aad sawirka kadhigtid noocyada looyaqaan .JPG ama .GIF oo aad ugasahlan ama ugayar nooca hore. Badanaana waqtigan Internetka waxaa la adeegsadaa labada dambe ee .JPG iyo .GIF
Haddii aad haysatid tusaale ahaan Microsoft FrontPage waxaa kuusahlanaanaya in sawirkii .bmp aad u bedeshid .JPG ama .GIF, dabcan weyjiraan barnaamijyo kale oo sawirada isku bedelikara, halkanse tusaale ayaan u sooqaatay Microsoft FrontPage.
Maxsuulka ii soo baxay waakan dhanka midig kamuuqda, waxaan filayaa ama qiyaasayaa in aad adiguna kuguulaysatey samaynta sawirka shaashadda ama Screen Capture, kaas oo aan qiyaasayo in adeegsigiisu uu faa'iido badan kuuyeelan doono, Insha Allah. Sida aad aragtidna qaabkani waa mid aad u sahlan, marka aad baratidna waa qaab xusuustiisu ay sahlantahay - Waxaad keliya oo u baahantaya in aad xusuusnaatid Print Creen, isla mar ahaantaana Kambuyuutarka ay kujiraan barnaamijyo sahlaya qabashada sawirka.
Haddii aad ka faa'iidey qaybtaan, fadlan boggaan aad hadda akhriyeysid sawirkiisa kudar boggaaga, ama usheeg asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan qaybaha HTML, waxaan aad u jeclahay in dad badan ka faa'iidaan qaybtaan Ilaah dartiis ama Ilaah hortiis ee fadlan gaarsii intii aad awoodid ama siibar asxaabtaada si ay aqoonta Internetka ee shacabkeenu u siyaado.
Tab iyo Xeelad
Waxaa lagayaabaa in aad isweydiisid su'aasha ah: Sidee u sawiraa shaashad keliya haddii ay furanyihiin shaashado badan ee kambuyuutarkayga ah? - Waxaan ugajeedaa sidee u sawiraa hal "Srceen' haddii dhawr "Sreen" ay furanyihiin.
Jawaabtu waa: Waxaad marka hore korsoomarisaa (ama ugusoo saraysiisaa) shaashadda (screen) aad rabtid in aad sawirtid, kaddibna waxaad halmar isla qabataa ama iskumar riixdaa ALT iyo PRINT SCREEN.
Ufiirso: Marka aad riixdid "PRINT SCREEN" keliya waxaa sawirmaya dhammaan waxa kamuuqda shaashada Kambuyuutarkaaga, hadiise aad iskumar riixdid ALT + PRINT SCREEN waxaa sawirmaya shaashada furan oo keliya ama tan ugu saraysa haddii shaashado badani furanyihiin.
Casharka xiga waxaan ku baran doonaa sida loo sameeyo daaqad soo boodeysa ama Popup...